Posted on 11 February 2018 By Rédacteur Charismatique
Ny Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitry ny fiadanana, Andriamanitry ny filaminana sy ny hatsarana. Noho izany, izay rehetra ataontsika amin’ny fiaraha-miasa amin’Izy Andriamanitra dia tokony hifanaraka sy ho taratra amin’ireo toetran’Andriamanitra ireo. Amin’ny maha-olombelona vatana, saina ary Fanahy dia tokony ho Hamaky ny tohiny
MINISTERAN’NY FITORIANA NY VAOVAO MAHAFALY
Posted on 10 February 2018 By Rédacteur Charismatique
Ny asam-panirahana ny tsirairay sy ny asa apostola karismatika ao anatin’ny fiainantsika dia manentana sy mitarika antsika harisika hiaina ny Tenin’Andriamanitra, dia ny Evanjely izany. Ho an’ny Ministeran’ny Fitoriana ny Vaovao Mahafaly àry, dia tovozintsika sy hita taratra mazava ao Hamaky ny tohiny
Raha jerentsika sy dinihintsika tsara ny iraka nataon’i Jesoa, Ilay Zanak’Andriamanitra, dia tsapantsika fa ny ankamaroan’ny iraka nataony dia momban’ny fanasitranana, fanafahana sy fanamavainana ny rofin’ny olona. Ireo famantarana amam-pahagagana ireo dia manambara tokoa fa Izy no Ilay voahosotra “MESIA”, Hamaky ny tohiny
CROISADE DES COEURS PURS
« Ady ho amin’ny fahamasinan’ny tanora» Teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana Katolika dia efa re ombieny ombieny ny teny hoe « croisade ». Tamin’ny taonjato faha 12 sy faha 13 dia babon’ny finoana silamo ny tanànan’ny Jerosalema. Ka mba hamerenana indray an’io tanàna masina Hamaky ny tohiny
PELERINAZY ISRAEL 2020
Ny fihavaozana Karismatika dia mikarakara pelerinazy any amin’ny Tany Masina (Israel) ny 12-21 Mai 2020 ho avy izao. Ny saran’izany dia 10.000.000Ariary. Ao anatin’io avokoa ny saran-dalana mandroso sy miverina (Antananarivo- Istanbul- Israel-Antananarivo), ny visa, ny sakafo rehetra amin’ny fivahinianana, Hamaky ny tohiny
Aomônie sy mpandrindra nasionaly
Zoky Marie Hasimbola
Zoky Croisade des cœurs purs sy Sekretera faharoa.
Mpandrindra nasionaly ny tanora croisade des cœurs purs.
PELERINAZY Portugal – Espana – Frantsa 2020
Pèlerinage Jérusalem Novembre 2019